'वर्तमान सरकार इतिहासको मजाक हो'
विप्लव नेतृत्वको नेकपा नेता अनिल शर्मा भन्छन्
कृष्ण गिरी काठमाडौं, २५ असार
नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य अनिल शर्मा 'विरही' अध्ययनशील, तर्कशील र प्रस्ट वक्ताका रुपमा चिनिन्छन् । माओवादी सशस्त्र विद्रोहका बेला भारतको विहारबाट पक्राउ परी जेल बस्दा उनले ‘सम्झनामा भारतीय जेल’ शीर्षककाे संस्मरणात्मक कृतिसमेत प्रकाशित गरेका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपाका स्थायी समिति सदस्य पार्टीको कमान्ड इन्चार्ज हुँदा उनले पोलिटब्युरो सदस्यको हैसियतमा यो जिम्मेवारी निर्वाह गरे । प्रतिबन्धित नेकपाका नेता शर्मासँग उनको पार्टीका गतिविधिका विषयमा शिलापत्रकर्मी कृष्ण गिरीले गरेको कुराकानी ।
तपाईं मूलधारको राजनीति छोडेर भूमिगत हुनुको कारण के हो ?
हाम्रो पार्टी र पार्टी पंक्ति भूमिगत भएको छैन । हामी गाउँ र झुपडीमा तल्लो वर्गका जनताको बीचमा छौं । हामी सञ्चार जगतसँग पनि छौं । भूमिगत भनेको के हो ? सिसाको महलमा बस्ने र ट्राफिक जाम गराउँदै हिँड्नेहरुले भुइँमान्छे देख्दैनन् । त्यसैलाई सचेत नागरिक र सञ्चारकर्मीले पनि भ्रमित धारणा बनाएर बुझ्नुभएन । भूमिगत शासकहरु छन्, जो आफ्नो उठबस काम कारबाही, यात्रा, भेटघाट सबै लुकीछिपी गर्छन् ।
एकीकृत जनक्रान्ति भन्दै राजनीतिक गतिविधि गरिरहनुभएको छ, के हो याे ?
एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाले नेपालमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न चाहेको हो । साम्राज्यवादले नेपालमा आत्मनिर्भर (परम्परागत) पुँजीवादी व्यवस्था पनि स्थापना गर्न दिँदैन । त्यसले नेपाललाई उसको सुरक्षित बजारभन्दा माथि उठ्न दिएको छैन । यहाँका शासक देशको कच्चा पदार्थ, बजार र श्रमशक्ति प्रभुलाई सुम्पेर कमिसन र सत्ताभोग गरिरहेका छन् । त्यस्तो नमान्ने कारिन्दालाई गल हत्याएर निकालिन्छन् ।
तपाईंले देख्नुभएकै छ, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को राष्ट्रवाद र क्रान्तिकारी जलपको हविगत त्यसैले विश्व परिस्थिति र नेपाली विशेषतासहितको क्रान्ति गर्ने बाटो नै एकीकृत जनक्रान्ति हो ।
अनि यो उद्देश्य प्राप्ति गर्ने बाटोचाहिँ सशस्त्र विद्रोह बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन ?
सशस्त्र र शान्तिपूर्ण स्वरुपको बीचमा कुनै चिनियाँ पर्खाल हुँदैन । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकै बीच बाटोका बार भत्काइन्छन् । वाहन रोकिन्छन् । प्रहरीमाथि ढुंगामुढा हुन्छ । अब भन्नोस्, त्यो शान्तिपूर्ण हो कि हिंसात्मक ? कानूनी कि गैरकानूनी ? राप्रपा, कांग्रेस वा गुठी विधेयकविरुद्धको संघर्षमा प्रहरी घाइते भए, ती संघर्ष शान्तिपूर्ण कि हिंसात्मक ? त्यसैले समाज लामो हिंसात्मक विरोधको प्रक्रियाबाट यहाँसम्म आएको हो ।
ए, त्यही भएर प्रहरीसँग पनि मुठभेडमा उत्रनुभएको ?
कार्ल मार्क्सले भन्नुभएको छ, ‘हतियारको आलोचनालाई आलोचनाको हतियारले समाधान गर्न सकिन्छ ।’ एउटा शोषक वर्गको हातबाट अर्को शोषक वर्गको हातमा सत्ता पुर्‍याउनु, सत्ता आलोपालो गर्नु, थोरै सुधार गरेर विद्रोह साम्य पार्नु, कुलीनहरुको लुटपाटलाई निरन्तरता दिनुबाहेक शान्तिपूर्ण ढंगले संसारमा कतै पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले उत्पादनका साधन जनताको हातमा आएको एउटा पनि उदाहरण छैन ।
नेपालमा त सामान्य सुधारकै लागि पनि देशले ठूलाठूला हिंसात्मक रुपको अनुभव गर्नुपरेको छ । प्रधान रुप कुन भन्ने मात्रै हो । त्यो पनि शासकको चरित्रमा भर पर्छ । अहिले सरकारले हामी मात्र होइन, देशकै विरुद्ध लुटपाट र हिंसा थोपरेको छ । हामीले त संयम अपनाइरहेका छौं । हामी परिस्थिति भड्किन नपाओस् भन्नेमा सबैको भूमिकाको अपेक्षा गर्छौं ।
भनेपछि राजनीतिक पार्टीेलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदलिएछ हैन ?
देशका सबै राजनीतिक दललाई एउटै डालोमा हाल्न सकिँदैन । देशमा सरकार र संसद् वरपर दलाल पुँजीवादी दल छन् । त्यसभित्र पनि उदार र कटरपन्थी प्रवृत्ति र पात्रहरु छन् । त्यसबाहिर क्रान्तिकारी, वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरु छन् ।
सहरकेन्द्रित कार्यक्रम असफल भएपछि गाउँ पस्नुभएको हाे त ?
सहरमा हाम्रो नीति र योजनाअनुसार नै आधारभूत कार्यक्रम भइरहेका छन् । गाउँमा त हामी सधैं नै छौं ।सहर र गाउँमध्ये एउटामा मात्र केन्द्रित हुने सोचले अबको क्रान्ति सम्भव छैन भन्ने कुरा एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाले निष्कर्ष निकालेकाे छ ।
विषयलाई घटनागत रुपमा होइन कि रणनीतिक रुपमा अगाडि पछाडि गरेर समग्रमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । एक–दुई घटनालाई हेरेर समग्र विषयको संश्लेषण गर्नुहुँदैन ।
स्थायी समिति सदस्य हेमन्त प्रकाश वलीको गिरफ्तारीदेखि देशका विभिन्न स्थानमा भएका विस्फोटमा पार्टीलाई नै क्षति भयो । बिनातयारी संघर्षमा होमिनुभएको जस्तो पो देखिँदै छ त ?
सुदर्शनको गिरफ्तारीले ठूलो क्षति भएको छ । भरत बम, विजय श्रेष्ठ, प्रज्वलनलगायत सयौं नेता–कार्यकर्ता जेलमा छन् । क्रान्तिमा यस्ता नियमित आकस्मिकता आइरहन्छन् ।
गोन्जालोले ‘जीवन हो, कुनै पनि बेला धरापमा पर्न सक्छ’ भन्नुभएको थियो । क्रान्तिद्वारा त्यसको सामना गर्नुपर्छ । जहाँसम्म आन्तरिक दुर्घटनाको सन्दर्भ हो, पार्टीले छानबिन र अध्ययन प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएपछि मात्र भन्न सकिन्छ ।
धेरै नेता कार्यकर्ताले पार्टी छोड्न थाले । तपाईंहरुको राजनीतिक एजेन्डा मन नपराएर कि कार्यशैली ?
वर्ग संघर्ष पेचिलो बन्दै जाँदा घात–प्रतिघातका घटना पनि पेचिलो बन्दै जानु वस्तुगत नियम नै हो । प्रहरीलाई दबाब दिएर गिरफ्तार गर्न लगाउने अनि राजनीतिक नेता गएर आत्मसमर्पण गराउने रणनीतिमा सरकार छ ।
यो खुमबहादुर–पूर्णबहादुर कम्पनीले लागू गरेर पराजित भएको बासी कार्यशैली हो । जनयुद्धको समयमा गाउँका गाउँमा आत्मसमर्पण गरेका समाचार आउँथे । तर, झन् झन् धेरै जनमत जनयुद्धतिर चलायमान हुन्थे । अहिले पनि त्यही अवस्था हो । नकारात्मक चित्रभन्दा सकारात्मक पक्ष कता हो कता बलशाली छ ।
तपाईंहरुबीच एकीकृत जनक्रान्ति र छापामार युद्धको कार्यदिशाबारे पुनः बहस सुरु भएको हो ?
हाम्रो पार्टीमा एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाको विषयमा शत प्रतिशत एकरुपता छ । त्यसप्रति हामी अझ दृढ हुँदै गएका छौं । दृष्टीविहीनहरूले हात्ती छामेझैं कतिपय स्वघोषित बौद्धिक नामधारीको आत्मरतिको विषयमा केही भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।
पूर्वाग्रह र अव्यक्त चाहना पूरा नहुँदा पैदा हुने कुण्ठाग्रस्त अपनवायु त्याग गर्नेहरुले जगत् हँसाउनेबाहेक अरु के नै गर्छन र !
दाङ सम्मेलनमा नेतृत्वको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कुरा उठेको थियो तर कार्यान्वयन त गर्नुभएन नि ?
प्रतिक्रियावादीले विदेशी बैंक र अमूक व्यक्तिको स्वामित्वमा अथाह कालो धन थुपारेका हुन्छन् र जनतालाई मूर्ख बनाउन समय समयमा केही अंश निजी सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको नाटक मञ्चन गर्छन् । त्यो नाटक यथार्थभन्दा काेसाैं टाढा हुन्छ ।
वास्तविक सम्पति सम्बन्ध त्यहाँ हुन्छ । सम्पत्ति विवरण त के र कसको घरमा कुन दिन के पाकेको छ भन्ने कुरा छिमेकी र जनतालाई एक एक पाईपाई थाहा छ । वास्तविक हुलिया नाटकका दृश्यमा होइन, जनताबाट लिनुपर्छ । हरेक नेतृत्व र व्यक्ति जनताको निगरानी बाहिर छैन ।
शान्तिपूर्ण अवतरणका लागि तपाईंको पार्टीको न्यूनतम सर्त के के छन् ?
हाम्रो कोहीसँग केही सर्त छैन । कमण्डलु भिरेर भौंतारिनेले क्रान्तिको नेतृत्व गर्दैनन् । क्रान्ति अथाह सम्भावना र दुर्घटनासहितको महान् सम्भावनाको मोर्चा हो भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ । जनताको परिवर्तनको चाहना र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाबाहेक हाम्रो अर्को कुनै सर्त र सपना छैन ।
सरकारले तपाईंहरुकाे माग के हो, अहिलेसम्म थाहा नभएको बताउँदै आएको छ । यस्तै अन्योलमा हो र तपाईंको पार्टी ?
प्रधानमन्त्रीलाई महाकाली नदी कसरी बेच्ने, कर्णाली र अरुण कसरी बेच्ने भन्ने थाहा छ । साम्राज्यवादको चाकरी कसरी गर्ने भन्ने थाहा छ । केपी ओली जस्ता नेताहरु देशको प्रधानमन्त्री हुनु विडम्बना हो । कार्ल मार्क्सको शब्दमा यो इतिहासको मजाक हो ।
सर्लाहीमा एक जना नेताले भर्खरै ज्यान गुमाए, बम प्रकरणमा पनि तपाईंहरुकै कार्यकर्ता परे, किन ?
सर्लाहीमा हत्या गरिएका कुमार पौडेलको विषयमा पार्टीले आफ्नो धारणा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेकै छ । मेरो पनि त्यही हो, अरु के नै हुन्छ र ? कुमार पौडेलको विषयमा प्रहरीको दाबी शत प्रतिशत झुट र कपोकल्पित छ ।
अपराध गर्न सरकार र नेताहरुले प्रहरीलाई उक्साउने, नेताहरु पर्दा पछाडि लुकेर बस्ने र प्रहरीलाई बदनाम गराउने तत्त्वहरु पनि होलान् । सर्लाही हत्याकाण्ड सामाजिक दलाल पुँजीवादको वास्तविक अनुहार हो ।
ओली सरकार देशलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्न चाहन्छ । त्यसका लागि जनघात, हत्या र राष्ट्रघातलाई तीव्रता दिएको छ । शान्तिपूर्ण र निःशस्त्र कार्यक्रममा संलग्न नेता–कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिरहेको छ । यसबाट सरकार देशमा शान्ति चाहन्न भन्ने पुष्टि भएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार २६, २०७६, १२:४६:००